Isilumkiso Somthetho | Oxford isiXhosa Living Dictionaries
Ikhaya Isilumkiso Somthetho
IZikhalazo zokwaPhulwa kwelungelo lombhali elilelokushicilela nokuthengisa umsebenzi wakhe
I-OUP ihlonipha, kwaye ithatha ukhuseleko lwamalungelo empahla eveliswe ngengqiqo ngokuzimiseleyo. Ukuba ukholelwa ekubeni umxholo wale webhusayithi wophula ilungelo lombhali lokushicilela nokuthengisa umsebenzi wakhe kwaye unqwenela ukuba wehliswe, nceda uthumele isaziso esibhaliweyo ngeimeyile okanye ngeposi eya kuquka:
(i) Umtyikityo owenziwe ngqo okanye ongowekhomputha womnini welungelo lombhali elilelokushicilela nokuthengisa umsebenzi wakhe okanye ubani ogunyaziselwe ukusebenza egameni lomnikazi welungelo lombhali elilelokushicilela nokuthengisa umsebenzi wakhe.
(ii) Ukuchongwa komsebenzi ophantsi kwelungelo lokushicilela ekubangwa ukuba wophuliwe, okanye, ukuba imisebenzi ephindaphindiweyo yelungelo lokushicilela kwiwebhusayithi enye imelwe sisaziso esinye, uluhlu lwemisebenzi enjalo kulo webhusayithi.
(iii) Ukuchongwa kokubhaliweyo ekubangwa ukuba kophula ilungelo (okanye kungumxholo womsebenzi owophula ilungelo) okwaneleyo ukuba kuvumele i-OUP ukuba ichonge kwaye ikhombe oko kubhaliweyo.
(iv) idilesi yakho, inombolo yemfonomfono, kwaye, ukuba iyafumaneka, idilesi ye-imeyile ekunokuqhagamshelwana ngayo nawe.
(v) Okubhaliweyo okuthetha ukuba unenkolo elungileyo ekholwa ukuba ukusetyenziswa kokubhaliweyo ngendlela ekukhalazwe ngayo akugunyaziswanga ngumnikazi welungelo lombhali elilelokushicilela nokuthengisa umsebenzi wakhe, iarhente yakhe, okanye ngumthetho.
(vi) Ingxelo yokuba ulwazi olukwisaziso luchanekile, kwaye luphantsi kwesohlwayo sokuxoka phantsi kwesifungo, ukuba ugunyaziselwe ukusebenza egameni lomnikazi welungelo elilodwa ekutyholwa ukuba lophulwe.
Nceda thumela esi saziso kwiarhente yeDMCA eyalathiweyo:
Ngeposi: ISebe lezomThetho
Iimbono kunye neenkcazelo ezikhoyo ezifakwe kwibhlog ye-Oxford Dictionaries namagqabaza akuyomfuneko ukuba zibonise iimbono okanye ukuma kwe-Oxford University Press.